Happy Holidays! နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊ – II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Happy Holidays! နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊ – II
Happy Holidays! နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊ – II
Posted by Kyaemon on Jan 2, 2013 in Arts & Humanities, Education, Entertainment, Environment, Events/Fundraise, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel | 1 comment
boat parade Christmas Christmas Lights CHRISTMAS SONGS FLORIDA
အီတလီနိုင်ငံ၊မီလန်မြို့DuomoSquare ကွင်း ပြင်မှာခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုနေရာချထားတာပါ၊
လူတွေကBelgium နိုင်ငံ၊Antwerp မြို့လယ်Grote Marktအရပ်ရှိ ခရစ်စမတ်အပင်ကြီးကိုလာကြည့်ရင်းဘေးကဘဲဖြတ်သန်းသွားလာနေကြတာပါ၊
လူတွေကSenegal နိုင်ငံ Dakar မြို့လယ်ကအပြင်အဆင်တွေကိုလာကြည့်ရင်းသွားလာနေကြတာ၊
(အစိမ်းရောင်နဲ့ဟာကSanta Claus ရဲ့သမင်ရုပ်ပုံဖြစ်ကာ၊ရိုးရိုးနဲ့ယဉ်ယဉ်လေးဖြစ်ပေမဲ့
ကျန်ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ဘို့ linkလင့်ခကိုနှိပ်ပြီးကြည့်ပါ၊
နံမယ်ကျော်အီတာလီနိုင်ငံသား၊မျက်မမြင်အဆိုကျော် Andrea Bocelli
Christmas Songs – Frank Sinatra – Jingle Bells
Search results for holiday boat parade
2012 Holiday Boat Parade
2012 23rd Annual Lighted Boat Parade Punta Gorda Florida – YouTube
Dana Point Boat Parade 2012 – YouTube
San Pedro, California (near Long Beach)
San Pedro Holiday Boat Parade Christmas 2012 – YouTube
Mystic Holiday Boat Parade 2012 – YouTube
Mystic River is the scene for the 10th annual Holiday boat parade. Boats decked in lights and good holiday cheer thrilledacrowd of hundreds who lined both sides of the river to kick off the holiday season. MYS-TV Studios was on hand to capture the flavor of this annual event sponsored by Thames Valley Communications and the Mystic Chamber of Commerce.
Photos: Christmas Around the World – WSJ.com
ကာလီဖိုနီးယားSan Gabriel တောင်ကြားPasadena မြို့Hastings အရပ်ကမီးထွန်းပွဲအလှ
ကာလီဖိုနီးယားSan Gabriel တောင်ကြားCovina မြို့ကမီးထွန်းပွဲအလှ
ကြေးမုံဂျီးလည်း ခါကြီးရက်ကြီးမှာ ကြောင်ကြီးအခြစ် ခံရပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်